ပီတိ: August 2008
Posted by P.Ti at Sunday, August 31, 20087comments
Posted by P.Ti at Saturday, August 30, 20085comments
ညဥ့်နက်အောင်စာဖတ်၊ နေမြင့်မှအိပ်ယာကထတတ်တဲ့ ကျောင်းသူဘ၀က အကျင့်က မပျောက်သေးတော့ ကျောင်းကားအမှီ အမြန်ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ တခါတရံ ထမင်းချက်ချိန်မရပါဘူး။
ကျွန်မ ထမင်းဗူးမပါတဲ့ တစ်နေ့မှာ၊ ကိုတင်မိုးက သူထမင်းကျွေးမယ်၊ သူ့နောက်လိုက်ခဲ့လို့ခေါ်ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ထမင်းစားကျောင်းဆင်းချိန်မှာကိုတင်မိုးနဲ့အတူ ကျောင်းကနေ ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုတင်မိုးက ရှေ့ကနေ ကျောင်းနဲ့ကပ်ရက် ဓမ္မဗိမာန်ထဲကို ၀င်သွားပါတယ်။ ကျွန်မကလည်း “ထမင်းဆိုင် မသွားပဲ ဓမ္မဗိမာန်ထဲ ဘာလို့ဝင်သွားပါလိမ့်… ဘာအကြောင်းမှာ ရှိပါလိမ့်…” လို့ အောက်မေ့ရင် လိုက်သွားမိပါတယ်…
ဓမ္မဗိမာန်ထဲရောက်တော့ “ကြွပါဆရာတို့... ကြွကြပါ…” နဲ့ ၀ိုင်းဝိုင်းလည် ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်။
ဟင်းပွဲအစုံနဲ့ ထမင်းဝိုင်းရှေ့မှောက်ရောက်သွားတော့မှ ကိုတင်မိုးက အလှူကိုခေါ်လာတာကိုးလို့ သိရတော့တယ်။
အလှူရှင်နဲ့တကွ ဧည့်ခံသူအပေါင်းက အင်မတန် ဖော်ရွေကြပါတယ်။ အားနာရလောက်အောင် ဟင်းပွဲ၊ အချိုပွဲ၊ လ္ဘက်ပွဲ ပြည့်စုံရုံမက ပိုလျှံအောင်ကို ကျွေးမွေးဧည့်ခံကြပါတယ်။
“ကဲ ထမင်းကျွေးပြီးပြီနော်… စားကောင်းတယ်မဟုတ်လား.. အလှူရှင် ဒါနမြောက်အောင် လုပ်တာလည်း ကောင်းတဲ့အလုပ်၊ အခွင့်ကြုံရင် အဲလို ကောင်းတဲ့အလုပ် လုပ်တယ်.. ” တဲ့…
သူ့စကားအရ “အလှူအိမ် ၀င်စားလေ့ရှိတာပေါ့နော်… ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်…
ကိုတင်မိုးက အဲသည်လို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ်လေ့ရှိပါတယ်….
ကိုတင်မိုး အမြဲကိုင်ဆွဲတဲ့ သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ကြီးကို ဆရာ၊ ဆရာမအပေါင်းက အမည်ပေးကြပုံလေးကိုလည်း ပြောပြပါဦးမယ်…
(မေမေရေးပေးထားတဲ့ သူမှတ်မိတဲ့ ဆရာကြီးတင်မိုးရဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ တချို့စာဖတ်သူတွေ ရှုပ်သွားမှာ စိုးလို့ပါ။)
Posted by P.Ti at Friday, August 29, 20082comments
Posted by P.Ti at Thursday, August 28, 20085comments
စနေနေ့လည်ကစပြီးရွာတဲ့မိုးက တနင်္ဂနွေနေ့အထိ စွေပြီးရွာလိုက်၊ သည်းသည်းမဲမဲရွာလိုက်နဲ့ ရာသီဥတုက အေးအေးလေးနဲ့နေလို့ကောင်းနေပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည်စာစားပြီအချိန်မှာ မိုးကလည်းသည်း လူကလည်းအပျင်းဓာတ်ခံရှိတော့ ကော်ဖီလေးဖျော်၊ အိပ်ယာပေါ်တက် စာအုပ်ကလေးကိုင်ပြီးတော့ မရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ စည်းစိမ်ယစ်နေမိပါတယ်။
စာအုပ်တွေဖတ် မျက်စိညောင်းလို့ ဟိုတွေးဒီတွေး တွေးမိတာ - လွန်ခဲ့သော ၁၇နှစ်ခန့်က အခုလို မိုးလေးစိမ့်စိမ့်မှာ အညာရဲ့ အိုအေစစ် ပုပ္ပါးတောင်မကြီး အလယ်မှာရှိတဲ့ night lodge ကိုသွားခဲ့တဲ့ခရီးလေးကိုပါပဲ။ အဲဒီတုန်းကလည်း အခုလို မိုးစွေစွေလေးရွာနေခဲ့ပါတယ်။ လေတွေက တ၀ီးဝီးတိုက် တိမ်တွေက ကိုယ်ဘေးနားကနေဖြတ်သွားတာကို ခံစားရတဲ့ အရသာဟာ တိမ်ကြားထဲ လေဟုန်စီးနေသလိုပါပဲ။
ရာသီဥတုကြည်ရင် မြင်ရတဲ့ ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်ကိုတောင် မမြင်ရတော့ပါဘူး။
ပူအိုက်တဲ့ အညာလို့တောင် မထင်ရတဲ့ ရာသီဥတု နဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသကို ရောက်နေတယ်လို့ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်က တော်တော်လေးကို နှစ်ခြိုက်မိပါတယ်။ အဲဒီမှာ စားသောက်ရတဲ့အထဲက မှတ်မှတ်ရရကတော့ မြင်းခွာရွက်ဟင်းချိုပူပူလေးပါပဲ။ ချမ်းအေးတဲ့အချိန်မှာ ပူပူနွေးနွေးလေးသောက်လိုက်ရတာ တော်တော်လေးအရသာရှိပါတယ်။
ရောက်တဲ့ညမှာတော့ ချမ်းချမ်းအေးအေး စောင်လေးနဲ့ကွေးပြီးအိပ်လိုက်ရတာ အခုလိုပဲ ဇိမ်တော်တော်ရှိခဲ့တာပဲ…
နောက်တနေ့ မနက်လင်းတော့ မိုးတိတ်နေတာနဲ့ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကို လျှောက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ သတိရမိတာကတော့ တောင်မကြီးမှာရှိတဲ့ ရေထွက်တစ်ခုကို သွားကြည့်တာပါ…
အဲဒီရေထွက်ကို တောကြိုးအုံကြား မိုးရေနဲ့ ချော်နေတဲ့ လူသွားလမ်းကတဆင့်သွားရပါတယ်။
တောကြီးထဲမှာ တစုံတယောက်က သံတူကြီးတဲ့ ထုနေသလို “တုံ… တုံ…” ဆိုပြီး အသံမှန်မှန် ရိုက်နေသံကိုလည်းကြားနေရပါတယ်။ ဘာသံမှန်းမသိတော့ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို အားလုံး တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားမိနေပါတယ်။
ခဏနေတော့ ရေထွက်ကိုတွေရပါပြီ… ရေထွက်က ရေစထွက်လာတဲ့အောက်နားလေးမှာပဲ အုတ်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့ ရေလှောင်ကန်ကြီးကြီးတစ်ခုကိုတွေရပြီး အဲဒီမှ သံပိုက်တခုထွက်လာပြီး တောင်စောက်အောက်ကို သွယ်ထားပါတယ်။
“တုံ… တုံ…” အသံထွက်နေတဲ့ ရေကန်ရဲ့အောက် ပေနှစ်တယ်သုံးဆယ်လောက်မှာပါ။ အဲဒီနေရာကို ဆက်ပြီးဆင်း အကြည့် တောင်စောင်းအဆင်း တနေရာရောက်တော့ မေမေတစ်ယောက် မိုးရွာထားတော့ ရွံ့နဲ့ချော်ပြီး လဲမလိုဖြစ်သွားကာ ဘေးက သံပိုက်ကိုကိုင်လိုက်နိုင်တော့ ထိန်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ …. အားလုံးက အလန့်တကြားမေးလိုက်ပါတယ်…. မေမေကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ပြန်ဖြေတယ်..
“ရတယ်… ဘာမှဖြစ်ဘူး.. ချော်လဲတာမဟုတ်ဘူး… လေထဲမှာပဲ ပျံဝဲသွားတာ… မြေကြီးနဲ့တောင် မထိဘူး…” တဲ့…
မေမေလည်း လမ်းလျှောက်ရော.. နောက်က အမက …
“အမေ… လေထဲမှာ ပျံဝဲသွားတာကလည်း နောက်မှ ရွံ့တွေပေလို့… ဟားဟား…” ဆိုပြီး ပြောရင်ရီပါတော့တယ်….
အဲဒီကစပြီး လေထဲမှာပျံဝဲတာ… ရွံ့လေးပဲပေတာပါပဲ ..ဆိုပြီး အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း ပြောတာ အခုအချိန်အထိပါပဲ….
အဲဒီလိုနဲ့ အောက်နားရောက်တော့ “တုံ… တုံ…” လို့ အသံမြည်နေတဲ့ အရာကို ကိုတွေ့ပါတယ်။ ဖေဖေကတော့ ရေအားကိုသုံးပြီးတင်တဲ့ ရေတင်စက်လို့ ပြောပါတယ်။ ရေတင်စက်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်လို နာမည်ကိုလည်းပြောပြီး ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလည်း ရှင်းပြပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့ ဖေဖေဆီက အများဆုံး ကြားဖူး၊ လေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်…
အဲလို ဆက်စပ်တွေးနေရင်း… အဲဒီ ရေတင်စက်အကြောင်းကို ပိုသိချင်လာမိတော့… ရေစက်ရဲ့နာမည်ကိုမေ့နေတာနဲ့ ဖုန်းဆက်ပြီး မေးကြည့်မိသေးတယ်… ဖေဖေကတော့ “drum pump ဖြစ်မယ် လို့ထင်တယ်… ” လို့ပြောတာနဲ့ Google ကိုမေးကြည့်တာ မရှိပါဘူး… keywords တွေပြောင်းရှာကြည့်တော့မှာ တွေ့ပါပြီ… ram pump ပါ…
ရေအားကိုသုံးပြီး ရေကိုပြန်တင်တဲ့ pump အကြောင်းပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံက ရိုးရိုးလေးနဲ့ တော်တော်သေးအသုံးဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဘာသာပြန်ရမှာ ပျင်းတာနဲ့ အပေါ်က လင့်တွေမှာ လေ့လာလို့ရပါတယ်…
အဲဒီလို တောတောင်ထဲသွားခဲ့ရတာလေးတွေက တက္ကသိုလ်တက်တော့ ခြေလျင်တောင်တက်အသင်းကို ၀င်ဖို့ အားဖြစ်စေတယ်ထင်ပါတယ်။ တောင်တက်ခရီးတွေကို တခြား အဖွဲ့ဝင်သူငယ်ချင်းတွေလောက် စုံစုံလင်လင်မရောက်ခဲ့ပေမယ့် သွားခဲ့တဲ့ခရီးတွေကိုတော့ အခုအချိန်အထိ သတိတရ မှတ်မိနေဆဲပါ… တကယ်လည်း လွမ်းဆွတ်နေဆဲပါ…
တောင်တက်အသင်းဝင်ခဲ့ပုံ… လေ့ကျင့်ခဲ့တာနဲ့.. ခရီးထွက်တာကို အားခဲပြီးရေးခဲ့ဖူးပါတယ်… ဆက်ပြီးရေးဖို့လည်း စိတ်ပြန်ဝင်လာပါပြီ….
အခုအဲဒီအကြောင်း ဆက်ပြီးရေးသားနေတာ မပြီးသေးလို့ … ဒီ ကြော်ငြာ ဆားချက် ပို့စ်ဝင်လာတာနော်….
နောက် ဆားချက်ပို့စ် တစ်ခုလာပြီးရင် .. အဲဒီ ဇာတ်လမ်းကို ကြိုးစား အပြီးသတ် ရေးဖို့ကို အာရုံစိုက်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတာ ကို ပြောချင်တာပါ….
စာဖတ်သူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…. :D
Posted by P.Ti at Tuesday, August 26, 20082comments
Posted by P.Ti at Wednesday, August 20, 20085comments
Posted by P.Ti at Saturday, August 16, 2008 8 comments
Posted by P.Ti at Friday, August 15, 20086comments
ပြဿနာ အကြီးကြီး မဟုတ်ပေမယ့်
Posted by P.Ti at Wednesday, August 13, 20080comments
“သားလတ်ရေ… ငါတို့ အိမ်ခန်းရှာရတော့မယ်”
တနင်္လာနေ့တရက် ရုံးကနေအပြန် အိမ်ထဲကို တံခါးဖွင့်ဝင်တုန်း အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ ကွန်ပျူတာသုံးနေသာ အတူနေ သူငယ်ချင်းကို လှမ်းပြောလိုက်သည်။
“ဟင်… JTC မှာ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးလို့မရဘူးလား”
“အေး… မရဘူးတဲ့… JTC ကို ပြီးခဲ့တဲ့စနေသွားတွေ့တုန်းကတော့ အိမ်ကို ဆက်ငှားဖို့ အကျိုးအကြောင်းကို ဖက်စ်ပို့ခိုင်းတယ်ကွာ။ သူတို့အကြောင်းပြန်မယ်ပြောတာလေ… ”
“ဒီနေ့ ဖုန်းပြန်ဆက်တယ်… သူတို့ဆက်မငှားတော့ဘူးတဲ့…”
“JTC ကလည်း တနှစ်ထပ်ငှားလိုက်တော့ ဘာဖြစ်မှာကြနေလဲနော်… ဒီတိုက်ကလည်း နောက်တနှစ်ကျော်မှ ဖျက်မယ့်ကိစ္စကို…” သားလတ်က JTC ကို အပြစ်တင်နေသည်။
“ကဲပါ သူတို့ကို အပြစ်ပြောလို့ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်… နေဖို့အိမ်ခန်း အမြန်ရှာမှရတော့မယ်… အခုစာချုပ်က ပြည့်ဖို့က တလခွဲပဲလိုတော့တယ်… အချိန်မရှိတော့ဘူး”
“ဟုတ်… ကိုဖြိုးကိုလည်း ပြောလိုက်ဦး။ ဒီလူကြီးက အိမ်ခန်းကိစ္စထက် အခြားကိစ္စကို ပိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ ကိုကြီးကတော့ ကျောင်းတဖက်နဲ့ဆိုတော့ ကျွန်တော်ပဲ သူ့အစားအကုန် ဆုံးဖြတ်မှာဆိုတော့ ကိစ္စမှရှိဘူး… ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက်သဘောတူရင် ဖြစ်တယ်…”
အိမ်ခန်းတခန်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေ အတူတူ စုနေကြပြီး အိမ်သူကြီးမရှိပဲ ၀ိုင်းလုပ် ၀ိုင်းစားပုံစံနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့အိမ်က ပိုပြီး မိသားစုဆန်ပါတယ်။ မိသားစုနဲ့အဝေးမှာနေချိန်မှာတော့ ဒီလိုရင်းရင်းနှီးနှီးနေရတာ အထီးကျန်ဆန်တာကို သက်သာစေပါတယ်။
တကယ်တော့လည်း အတူနေသူငယ်ချင်းတွေက သူစိမ်းတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ သားလတ် နဲ့ ကိုကြီးက ညီအကို ဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ မိဘတွေနဲ့ ကျွန်တော့်မိဘတွေက တက္ကသိုလ်မှာကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ အမျိုးတွေလိုဖြစ်နေကြပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုကြီး နဲ့ ကိုဖြိုး က သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အပြင် ကျွန်တော်နဲ့က ရန်ကုန်မှာ အလုပ်အတူတူလုပ်ခဲ့ဖူးတော့ တော်တော်ရင်နှီးပါတယ်။
တခုခုလုပ်ရင် အကုန်တိုင်ပင်လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ထုံးစံရှိပါတယ်။ တယောက်လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း နောက်တယောက်က ကန့်ကွက်ခဲပါတယ်။
စကားပြောနေတုန်း ကိုဖြိုးအပြင်ကနေ အိမ်ထဲကို ၀င်လာပါသည်။
“ကိုဖြိုး… အိမ်ခန်အသစ်ရှာရတော့မယ်… ဒီအိမ်က ဆက်ငှားလို့မရတော့ဘူးတဲ့…”
“ကိုဖြိုးလည်း ၀ိုင်းကူပြီးရှာပါဦး။ အသိတွေကိုပြောကြည့်လေ၊ ဒီနားပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိမ်ပြောင်းမယ့်သူရှိရင် ဆက်ယူလို့ရတာပေါ့..”
နောက်တနေ့ အင်္ဂါနေ့ မနက်ကစပြီး ရှာဖွေရေးစတင်ပါတော့မယ်။ သတင်းစာ ကြော်ငြာတွေထဲရှာ၊ ပွဲစားတွေကို ဖုန်းဆက်။ အင်တာနက်ထဲမှာရှာ ဖုန်းဆက်။ ပွဲစားတွေကလည်း သူတို့မှာ အိမ်ခန်းမရှိလည်း ကြော်ညာတာပဲကိုး။
နေရာကြိုက်သော အိမ်ခန်း ကြော်ငြာတခုကို ဖုန်းလှမ်းဆက်ကြည့်လိုက်သည်။
“မင်းရဲ့ စထရိတ်တိုင်မ်းထဲမှာ ကြော်ငြာထားတဲ့ အိမ်ခန်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့… တလကိုဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲ…”
“ပီတိခင်ဗျား… ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတာလား၊ ကျောင်းတက်နေတာလား၊ ဘယ်နှစ်ယောက်အိမ်မှာနေမှာလဲ…”
“အလုပ်လုပ်နေတာပါ၊ နေမှာကတော့ ၄ယောက်ပါ…”
“အိမ်က တလကို ၁၈၀၀ ပေးရပါမယ်…”
“ဟင်.. အိမ်က အိပ်ခန်း နှစ်ခန်းပါ အိမ်မဟုတ်ဘူးလား”
“ဟုတ်တယ် အိပ်ခန်း နှစ်ခန်းပါ အိမ်ပါ။ အိမ်က နေရာကကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ အိမ်ကအသစ်ပြင်ထားတယ်၊ အထဲမှာ ပစ္စည်းတွေကလည်း အစုံပါတယ်။ နောက်ပြီး အခုအချိန်မှာလေ အိမ်ခန်းတွေကို နေဖို့ငှားမယ်လူပဲရှိတယ် ငှားစားချင်တဲ့ အိမ်ရှင်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်… ကြိုက်ရင်တော့ ယူထားလိုက် ဒီအချိန်မှာ ဒီဈေးကတော့မများဘူး…”
ပြီးတော့မှ ပွဲစာဂျေဆင်က မေးဖို့သတိရသွားတယ် ထင်ပါတယ်။
“မိသားစုနဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး… သူငယ်ချင်းတွေစုနေမှာပါ”
“အဲ.. အိမ်ရှင်က မိသားစုကိုပဲငှားချင်တယ်လို့ပြောထားတယ်… သူငယ်ချင်းတွေစုနေမှာဆိုတော့ အိမ်ရှင်က ငှားချင်လားမငှားချင်လား ပြန်ပြီးဆက်ပေးမယ်…”
“ဟုတ်ကဲ့… ၉၁၉၁ ၈၃၈၁ ပါ”
နေ့လည် ထမင်းစားပြီးတော့ နောက်ကြော်ငြာတခုကိုတွေ့သည်။ နေရာကလည်းကောင်းတယ် ပြောထားတဲ့ဈေးကလေးကလည်း မဆိုးလှပေ။
“ဟဲလို… ပီတီ စကားပြောနေပါတယ်… http://www.sg-house.com/ မှာတင်ထားတဲ့ အိမ်ခန်း ကိုမေးချင်လို့ပါ”
“ကော့စိန်ပါ… အိမ်ခန်းကတော့ ဘူတာနဲ့ နီးနီးလေးဗျ နေရာလည်းကောင်းတယ်၊ အထဲမှာ ပစ္စည်းတွေကလည်း စုံတယ်”
“ဟုတ်ကဲ့… ဈေးက တလကို ၁၅၀၀ နော်…”
“ဟုတ်တယ်… တခုပဲ အိမ်လခ စပေါ်ငွေကို ၅လစာပေးထားရမယ်၊ တလကြိုတက်ပေးရမှာဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့က ၆လစာ ကို စာချုပ်တဲ့နေ့မှာပေးရမယ်…”
“သြော်… ဒါဆို ၉၀၀၀ ကိုတခါထဲပေးထားရမှာပေါ့နော်…”
“ဟုတ်တယ်… ကျုပ်လည်း ငွေချက်ချင်းလိုနေလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြီးငှားတာပဲ…”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ.. နားလည်းပါတယ်။ ခြောက်လစာကို တခါတည်းပေးရမှာဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ ပြန်ဆက်ပါ့မယ်နော်…”
အိမ်လခက သက်သာပေမယ့် အိမ်လခကို ခြောက်လစာတခါတည်းပေးထားဖို့ကတော့ များလွန်းတယ်။ ပြီးတော့ လည်း စပေါ်ငွေဆိုတာ အိမ်ပေါ်ကဆင်းတော့မှ ပြန်ရမှာဆိုတော့ ငွေ ၇၅၀၀ က အသားတင် မြုပ်နေတော့မှာ။ ဘယ်လောက်စိတ်ချရမလဲဆိုတာကလည်း မသေချာတော့ အရှုပ်အရှင်း သက်သာအောင် မငှားတော့ဘူးလို့ပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်ရုံးရောက်ပြီး သိပ်မကြာဘူး သားလတ်ဆီက ဖုန်းလာပါသည်။
“ကိုပီတိ.. အိမ်ခန်းကြည့်ဖို့ ပွဲစားနဲ့ ညနေမှာ ချိန်းထားတယ်…” သားလတ်ကဖုန်းဆက်လာပါတယ်။
“ည ၈နာရီချိန်းထားတယ်… ကိုပီတိ နဲ့ ကာလန်းဘူတာ (Kallang MRT) မှာ ၇နာရီခွဲမှာတွေ့မယ်လေ၊ ပြီးတော့ ဘတ်စ်ကားစီးသွားရမှာ…”
“ဟုတ်လား.. နေရာက ငါ့အတွက်ကတော့ အဆင်ပြေတယ်၊ ရုံးနဲ့သိပ်မဝေးဘူးလေ… သားလတ်နဲ့ ကိုဖြိုးအတွက်ရော အဆင်ပြေပါ့မလား…”
“အိမ်က နေရာနဲ့ဈေးက မဆိုးလို့… နောက်ပြီး MRT နဲ့လည်းသ်ိပ်တော့မဝေးဘူးဆိုတော့ သွားကြည့်တာတော့ မမှားဘူးလို့ ထင်လို့…”
“အေးလေ သွားတာပေါ့.. ကိုဖြိုးပါခေါ်လိုက်လေ.. ဆုံးဖြတ်စရာရှိတခါထဲ ဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်လို့…”
“ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးပြီ… ညနေသွားစရာရှိလို့ ကျွန်တော်တို့ပဲ ကြည့်ခဲ့ပါတဲ့…”
“ဟင်… ဘယ်ဖြစ်မလဲ… ဆုံးဖြတ်စရာရှိရင် အားလုံးရှိတော့ ကောင်းတာပေါ့…”
“ပြောတာ ကိုပီတိရာ… ကြီးမှ ၀က်သက်ပေါက်နေတော့ ခက်နေတာပေါ့…”
“သြော် အဲဒီကိစ္စလား… ဒီလူကြီး မမိုက်ပါဘူးကွာ… အိမ်ရှာဖို့ အရေးကြီးနေပါတယ်ဆို သူကလည်း ကြောင်နေတယ်…”
“အိုကေ လေ… ညနေတွေ့တာပေါ့…”
ညနေရုံးဆင်းတော့ အဆာပြေ မုန့်ဝယ်စားပြီးတော့ သားလတ်နဲ့တွေ့ဖို့ထွက်လာပါတယ်။ ကာလန်းဘူတာတွေ့ ပြီးတော့ ဘတ်စ်ကား ၃ မှတ်တိုင်လောက် စီးပြီးတော့ ကြည့်ဖို့အိမ်ကိုသွားကြပါတယ်။ Old Airport Road နားက အိမ်နားရောက်တော့ ပွဲစားကိုရှာမတွေ့။ ဖုန်းလှမ်းဆက်တော့လည်း မကိုင်၊ message ပို့တော့လည်းမပြန်နဲ့ ဖြစ်နေတော့ ခဏစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
တိုက်ကတော့ တော်တော်လေး ဟောင်းနေတဲ့ပုံစံပေါက်နေပြီး တော်တော်လေးလည်း ကျဉ်းမယ့်ပုံပါ။ အနားမှာလည်း MRT လမ်းအသစ်ဖောက်တော့ အိမ်မှာနေရင် တော်တော်နားငြီးမယ့်ပုံပဲ။
“သားလတ်ရေ အခြေအနေတော့ သိပ်မကောင်းဘူးကွ။ အိမ်က တော်တော်ကျဉ်းမယ်နော်… ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း သိပ်မကောင်းသလိုပဲ…”
“ဟုတ်တယ်… ရောက်ပြီးမှတော့ ခဏစောင့်ကြည့်တာပေါ့”
“အင်း.. ပွဲစားကို ဖုန်းထပ်ဆက်ကွာ… ပွဲစားကလည်း အချိန်မလေးစားဘူးနော်…”
သားလတ်က ပွဲစားကိုဖုန်းဆက်လို့ရသွားတယ်။ ပွဲစားတော့ ထုံးစံ အိမ်နံပါတ်ကို အတိအကျ ပြောမထားတော့ သူတို့မလာပဲ ဘယ်အိမ်လဲဆိုတာကို မသိပါဘူး။
“ကိုပီတိ.. ပွဲစားက အခုရောက်တော့မယ်လို့ပြောတယ်… ခဏစောင့်ပေးပါတဲ့”
“အေး အေး… သားလတ်… ဒီနားမှာ ငါတို့လို မယောင်မလည်လူတွေအများကြီးပဲနော်… သူတို့လည်း အိမ်ကိုလာကြည့်တဲ့ အိမ်ငှားတွေပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ် ”
“အင်း ဟုတ်တယ်ထင်တယ်၊ ဟို အတွဲက မြန်မာလို့တောင်ထင်တယ်…”
သားလတ်ကလည်း လူမျိုးကို ခန့်မှန်းနေသည်။
ပွဲစားလာတော့ အိမ်အပေါ်ကိုတက်ကြည့်ကြပါသည်။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ မယောင်မလည်လူတွေက ဒီတအိမ်ထဲကို လာကြည့်ကြတာပါပဲ။
အိမ်ခန်းက တော်တော်ဟောင်းနေတော့ ဓာတ်လှေကားတောင်မရှိပဲ အခုမှ တပ်မလို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အတက်လှေကားမှာကထဲက ရန်ကုန်က ရန်ကင်းတိုက်ခန်းတွေက လှေကားတွေ တက်ရသလို အငွေ့အသက်၊ အမြင်အာရုံကိုရလိုက်တော့ စိတ်ပျက်သွားပါပြီ။ အိမ်ခန်းလဲရောက်တော့ ပိုပြီးစိတ်ပျက်သွားပါတယ်။ အိပ်ခန်းတွေက ၁၁ပေ x ၁၀ပေ လောက်ပဲရှိတော့ တော်တော်လေးကျဉ်းပါတယ်။ မီးဖိုဆိုတာတောင် အဖြစ်ပဲပါပြီးတော့ အိမ်ကလည်း တော်တော်လေးစုတ်ပါတယ်။
“ဟလို… ပီတိပါ… ဒါက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း သားလတ်ပါ…”
“ဟုတ်တယ်… အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကလည်း အိမ်ခန်းခကို ၁၁၀၀ ပဲယူတာပါ… နောက်ပြီးတော့ ဒီနေရာက သွားရတာလွယ်ကူတယ်လေ…”
“MRT လိုင်း အသစ်ဖောက်နေတော့ အသံတွေဆူညံနေမှာပေါ့…”
“အင်း ဒါပေမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး…”
ပွဲစားဆိုတော့လည်း ပစ္စည်းမကောင်းတာတောင် ရောင်းထွက်အောင်တော့ ပြောပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ တခြား ငှားမယ်သူတွေကို လှည့်ပြီးစကားပြောနေပါတယ်။ အခြားသူ တွေကြည့်ရတာလည်း အိမ်ကို စိတ်တိုင်းကျပုံမရပါဘူး။
“သားလတ်ရေ.. အိမ်ကိုတော့ မကြိုက်ဘူး.. ဘယ်လိုသဘောရသလဲ”
“ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူး… ဒါပေမယ့် ဈေးက ချိုနေတော့ စိတ်ဝင်စားတာ…”
သားလတ်က ဒီမှာ ကျောင်းသားညီအကို နှစ်ယောက်ကိုထောက်ပံ့နေရတဲ့ အပြင် နောက်နှစ်ကျရင် လက်ထပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ သူ့ အနေနဲ့လည်း စဉ်းစားစရာဖြစ်နေမှာပေါ့…
ကြာသာပတေးနေ့ မှာ သတင်းစာထဲ အင်တာနက်ထဲ အိမ်တွေကိုလိုက်ရှာသေးသည်။ လိုချင်တဲ့နေရာမှာ မတွေ့။ တွေ့လို့ မေးလိုက်ရင်လည်း ဈေးတွေကခေါင်ခိုက်… နေစရာ ခိုအိမ်လေးလိုနေရာတောင် ဈေးတွေ နှစ်ဆဖြစ်နေပါ့လား…
လက်ကိုင်ဖုန်း အသံမည်လို့ကြည့်လိုက်တော့ ဂျေဆင် - အိမ်ပွဲစား ဆိုတဲ့ ခေါ်တဲ့လူနာမည်ပေါ်နေသည်။ ဖုန်းကို ဖြေလိုက်တော့…
“ဟလို ပီတိ နဲ့စကားပြောပါရစေ…”
“ပီတိ…ဂျေဆင်ပါ… မှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်… တနေ့က ကျွန်တော့်ကို Red Hill က အိမ်ခန်းကိုဈေးမေးထားတာလေ…”
“ပီတိတို့က သူငယ်ချင်းတွေစုနေမယ်ဆိုတော့ အိမ်ရှင်က ဈေး ၁၀၀ ပိုယူမယ်လို့ပြောတယ်….”
“အဲတော့ အိမ်လခက တလကို ၁၉၀၀ပေါ့… ဟုတ်လား”
“တလ ၁၉၀၀ ကတော့ များတယ်… ပြီးတော့ အိပ်ခန်း ၂ခန်းပဲပါတဲ့ သုံးခန်းအိမ်လေ…”
“ဟုတ်တယ်… အိမ်ရှင်က မလျော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်… နေရာလေးကကောင်းတယ်… ဒီအချိန်က အိမ်ရှင်တွေခေတ်ဖြစ်နေတယ်လေ…”
“ဟုတ်ရင်တော့ဟုတ်လိမ့်မယ်… ဒါပေမယ့် တလ ၁၉၀၀ က ငါတို့အတွက်များနေတယ်…”
“ဒါဆိုရင် ဈေးနဲနဲသက်သာတာကတော့ ရှိတယ်. တလကို ၁၅၀၀ နဲ့ တရောင်ဘာရု ဘူတာနဲ့ လမ်းလျောက်ရင် ၁၀ မိနစ်လောက် လျှောက်လို့ရတယ်… အိမ်က နေရာက ကောင်းတယ်.. အနေအထားကလည်း မဆိုးပါဘူး…”
ပွဲစားတွေ ၁၀မိနစ်လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်ဆိုတာ တကယ်သွားကြည့်ရင် ပြေးလို့တောင် ၁၀မိနစ်နဲ့ မရောက်နိုင်တဲ့ အကွာဝေးဖြစ်တတ်တယ်။ သွားကြည့်မှသိရမှာဖြစ်သည်။
“ဟုတ်ပြီလေ… ငါကြည့်မယ်… ဒီနေ့ညနေကြည့်လို့ရမလား…”
“ဘယ်နေ့ကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ပြန်ပြီး ပြောပါ့မယ်… ”
ဟင် ဘယ်လိုပွဲစားတွေဘာလိမ့်… အိမ်ငှားက ကြည့်မယ်ဆိုတာတောင် ပွဲစားက ပြန်ပြောမယ်တဲ့။ အရင်ကဆို အိမ်ငှားတွေကို အိမ်ကြည့်ဖို့ကို ပွဲစားတွေက ပြောလွန်းလော့ နောက်ဆုံး သည်းမခံနိုင်တော့ အိမ်မရသေးတာတောင် မကြိုက်တဲ့ပွဲစားဆို အိမ်ရပြီးညာပြီး ပိတ်သေးတာ။ အခုတော့ ပြောင်းပြန်တွေဖြစ်နေပြီး။
“စိတ်ချပါ… ကျေးဇူးပါပဲ ပီတိ… ပြန်ဆက်လိုက်ပါ့မယ်… ဘိုင်…”
သောကြာနေ့မှာ အိမ်တွေရှာတော့လည်း အသစ်မတွေ့၊ အလုပ်ကလည်း မထင်မှတ်ပဲများနေတော့သည်
“ကိုပီတီ နောက်ပွဲစားတယောက်က တနေ့ကကြည့်တဲ့အိမ်နားမှာပဲ နောက်တလုံးရှိတယ်တဲ့.. သွားကြည့်မလား..”
“အိုကေ… ညနေကို Kallang မှာပဲတွေ့မှာ မဟုတ်လား…”
“ကိုဖြိုးကိုရအောင် ခေါ်ရအောင်ကွာ… ဆုံးဖြတ်မယ့်လူ တယောက်မပါတော့ ကြိုက်တယ်ထားဦး ချက်ချင်း ဆုံးဖြစ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်…”
“ဟုတ်တယ်… ညနေကျရင် ၇နာရီလောက်တွေ့မယ်နော်… အစည်းအဝေးရှိသေးလို့ နောက်မှတွေ့မယ်…ဘိုင်”
“ဟလို… ကိုဖြိုး.. စကားပြောလို့ရလား…”
“သားလတ်ရဲ့ ပွဲစားက ညနေကျရင် အိမ်ကို ကြည့်လို့ရမယ်တဲ့ အဲဒါ သွားကြည့်ဖို့လိုက်ခဲ့ပါ…”
“ညနေကျတော့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ချိန်းထားလို့… ပီတိတို့ပဲကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ…”
“အာ… ကိုဖြိုးအဲလိုမလုပ်နဲ့… အိမ်ခန်းရဖို့က အရေးကြီးတယ်… မဟုတ်ရင် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ပြီး အိမ်မရသေးလို့မဖြစ်ဘူး…. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့မှာကို ဖျက်လိုက်ပါနော်… အကုန်လုံးသွားကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်တာကောင်းတယ်”
“မဟုတ်ရင် တယောက်နဲ့တယောက်တွေးတာတွေက မတူတော့လေ… နော်…”
“ဒါဆို Kallang မှာ ညနေ ၇နာရီအရောက်လာနော်... နောက်မှတွေ့မယ်.. ဘိုင်”
အိမ်ကိုကြည့်တော့ တနေ့ကသွားကြည့်တဲ့အိမ်နားမှာ ဒါပေမယ့် အိမ်က အတော်ကြီးကျယ်တဲ့ executive လို့ခေါ်တဲ့ အိမ်ခန်းဖြစ်နေသည်။ HDB အိမ်ခန်းပေမယ့် နှစ်ထပ်ဖြစ်သည်။ အောက်ထပ်မှာက ဧည့်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုနဲ့ ရေချိုးခန်း အိမ်သာရှိပြီး အပေါ်ထပ်မှာတော့ အိပ်ခန်း ၃ခန်းနဲ့ ရေချိုးခန်း အိမ်သာတွေရှိပါတယ်။ တော်တော်လေးလည်းကျယ်ပါတယ်။ အိမ်ကနေအပြင်ကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း တခြားတိုက်တွေပိတ်ကွယ်တာမရှိ မျက်စိတဆုံးမြင်ရသည်။ စင်ကာပူမှာ ဒီလိုမျိုးအိမ်ခန်းက ရှားပါဘိသနဲ့။ ဈေးတော့ မသေးဘူးဆိုတာ သိပေမယ့်… ပွဲစားကို ဈေးသေချာမေးတော့ တလကို ၂၅၀၀ တဲ့။ အိမ်ကလည်းတော်တော်ကြီးတော့ ဈေးကတော့ တော်တော်ကြီးနေသည်။ ပွဲစားကတော့ တော်တော်လေးအပြောကောင်းပြီးတော့ အိမ်ရှင်ကို ဈေးရအောင်ညှိပေးမယ်လို့ပြောနေသည်။
သားလတ် နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ အိမ်ကို့ ကြိုက်နေသည်။ ကိုဖြိုးကြည့်ရတာ သိပ်စိတ်မ၀င်စားပေ။
“ကိုပီတိ… ဒီအိမ်ကို အများဆုံးဘယ်လောက်ပေးနိုင်မလဲ…” သားလတ်က ကျွန်တော့်ကိုမေးသည်။
“ငါ့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ၂၀၀၀ လောက်ရရင် နေမယ်… တကယ်လို့ တို့လေးယောက်ဖြစ်နေတယ် အိပ်ခန်းပိုနေမယ်ဆို အိပ်ခန်းတခန်းကို ပြန်ငှားလိုက်ရင် ဖြစ်တယ်။ အခုနေငှားရင် ၈၀၀ လောက်တော့ရမှာ…”
“အင်းနော်… အဲဒါဆို ၁၂၀၀ လောက်ပဲကျတော့မှာ… အိမ်ကတော့ တော်တော်လေးကိုကျယ်တယ်။ နေရာကတော့ နဲနဲသွားရခက်မယ်… ”
“မင်းနဲ့ငါက အိမ်ကနေရုံးကို ဘတ်စ်ကားနဲ့ရောက်တယ်… ကိုဖြိုးကတော့ ဘတ်စ်ကားစီး ပြီးတော့ MRT ထပ် စီးရမှာ…”
“ကိုဖြိုး… ဘယ်လိုသဘောရသလဲ… ” သားလတ်က ကိုဖြိုးကိုလှမ်းမေးလိုက်သည်။
“ရှာတာက ရပါတယ် ကိုဖြိုးရယ်…ကိုဖြိုးလည်း ၀ိုင်းရှာပေးပါဦး… အိမ်စာချုပ်မပြည့်ခင် အိမ်ရမှာဖြစ်မှာ မို့လို့ပါ….”
“အင်း… ” ကိုဖြိုးကြည့်ရတာ ဒီအိမ်ကိုလည်းစိတ်မ၀င်စား အိမ်ရှာဖို့လည်း စိတ်ဝင်စားပုံမရပေ။
အိမ်ကလည်းမရသေးတော့ စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းနဲ့ တရက်ကုန်သွားပြန်ပြီ။
စနေ့နေ အိမ်ကြော်ငြာတွေကို ဖုန်းဆက်သော်လည်း အဆင်မပြေပေ။ နေရာအဆင်မပြေတာနဲ့ ဈေးအဆင်မပြေတာနဲ့၊ မိသားစုမှ ငှားချင်သော အိမ်နဲ့…
အရင်က အိမ်ရှာရတာ ဒီလောက် မခက်ပါဘူး… ခေတ်တွေပြောင်းကုန်ပြီ…
အိမ်ခန်း မရလို့ စိတ်ညစ်။
တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ အိမ်ရှာသော အလုပ် ဘာမှမလုပ် ဖြစ်ပေ။
တနင်္လာနေ့ မှာတော့ ထုံစံအတိုင်း ဘာတွေနဲ့မှန်းမသိ အလုပ်တွေရှုပ်နေမိတယ်။
အိမ်ပွဲစား ဂျေဆင် ဆီကဖုန်းလာသည်။
“ဟလို ပီတိ… ဂျေဆင်ပါ။ မနက်ဖြန်ညနေ အိမ်ကြည့်မလား။ တနေ့ကပြောတဲ့ တလကို ၁၅၀၀ နဲ့ တရောင်ဘာရုနားကအိမ်…”
“ညနေ ၇ နာရီကို အရောက်လာခဲ့ပါ…”
“ကျွန်တော်ကတော့ လာနိုင်မယ်မထင်ဘူး… ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ရှယ်လီ စောင့်နေပါလိမ့်မယ်… ”
ညနေကျတော့ သားလတ်ဆီက ဖုန်းလာပြန်သည်။
“ကိုပီတိ တနေ့က ပွဲစားပြန်ဆက်တယ်… ဟို Old Airport Road နားက ပထမကြည့်တဲ့ တိုက်အဟောင်းကိုပြတဲ့ ပွဲစားလေ…”
“ဟုတ်တယ်… သူက အိမ်ကိုယူမလားမေးနေတယ်…”
“မယူဘူးလို့ပဲပြောလိုက်ပါကွာ… အိမ်က ကျဉ်းပြီးတော့ ဟောင်းနေပါတယ်.. ပြီးတော့ အနားမှာက ဆောက်လုပ်ရေးက ရှိတော့ နားငြီးမှာ…”
“ဟုတ်ကဲ့… မယူဘူးလို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော်… ”
“နောက်ပြီးတော့ အဲဒီနားလေးကပဲ ဒုတိယကြည့်တဲ့ နှစ်ထပ်အိမ်က ပွဲစားကလည်း ဆက်သေးတယ်… ”
“အိမ်ရှင်ကိုပြောတော့ … အိမ်ရှင်က မြန်မာတွေဆို ငှားချင်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့… ၂၂၀၀ အနည်းဆုံးတော့ လုပ်ပေးမယ်ပြောတယ်… အဲဒီလောက်ဆို ယူမလား….”
“ငါကတော့ ယူလို့ဖြစ်တယ်… ကိုဖြိုးက သူရုံးကိုသွားရင် နဲနဲထောက်တာနဲ့ သူ့ကောင်မလေးအိမ်နဲ့ဝေးသွားတော့ မကြိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်လေ…”
“အင်း… ကောင်မလေးက အနောက်ဘက်ဆုံးမှာပဲ တသက်လုံးနေမယ်လို့ ဘယ်သူပြောလဲနော်… အိမ်ကတော့ တော်တော်ကောင်းတယ်…”
“အေး… ငါလည်းကြိုက်တာပဲ… ၂၂၀၀ က များသေးတယ် ၂၀၀၀ ရမလားပဲမေးလိုက်ပေါ့ကွာ…”
“သြော်…သားလတ်.. မနက်ဖြန် ညနေကျရင် အိမ်သွားကြည့်မယ်နော်… ငါ့ပွဲစားက အိမ်ကြည့်လို့ရတယ်ပြောထားတယ်… လိပ်စာကို SMS ပို့လိုက်မယ်။ အဲဒီကိုပဲ တိုက်ရိုက်လာတော့။ မနက်ဖြန်ညနေ ရနာရီအရောက်…”
“ဒါဆို အိမ်ကျမှတွေ့မယ်.. ဘိုင်…”
အိမ်ရောက်တော့ ကိုဖြိုးကို မနက်ဖြန် အိမ်သွားကြည့်ဖို့ လိုက်ခဲ့ဖို့ပြောလိုက်တော့
“ရုံးမှာ အစည်းအဝေးရှိတယ်… ပီတိတို့ပဲကြည့်ပြီး အခြေအနေပြောလေ… သင့်တော်ရင်လည်းငှားလိုက်ပေါ့… နေရာကတော့ မဆိုးပါဘူး”
“မြေပုံအရတော့ ဟုတ်ပါတယ်… အပြင်မှာကြည့်တာကတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့… အစည်းအဝေးရှိတယ်ဆိုလည်း … အင်း… ကျွန်တော်တို့ပဲ သွားကြည့်ရမှာပေါ့…”
အင်္ဂါနေ့ ညနေဘက် ရုံးဆင်းချိန် အိမ်သွားကြည့်ဖို့သွားတော့ မိုးတွေရုတ်တရက်ရွာလာသည်။ ကြည့်ရတာ တော်တော်နဲ့ တိတ်မည့်ပုံမပေါ်။ ရုံးကထွက်လာနောက်ကျတော့ တက္ကစီပဲငှားစီးလိုက်မိသည်။ တက္ကစီစီးတော့မှ ပိုဆိုးတော့သည်၊ ကားလမ်းတွေပိတ်ပြီး အချိန်တွေပိုကြာနေသည်။
“ကိုပီတိ… ပြော.. ဘယ်ရောက်နေလဲ…” သားလတ်က ဖုန်းပြန်ထူးရင်းမေးလိုက်သည်။
“ငါအခု တက္ကစီပေါ်မှပဲရှိသေးတယ်… သားလတ်ကရော ဘယ်ရောက်နေလဲ…”
“ကျွန်တော်လည်း တက္ကစီပေါ်မှပဲ… ရောက်တော့မယ်…”
“အိုကေ… ဒါဆိုဒါပဲလေ.. နောက်မှတွေ့မယ်…”
အိမ်ခန်းရှိတဲ့တိုက်ကိုရောက်ပါပြီ။ သားလတ်က ကျွန်တော့်ကိုစောင့်နေပါသည်။
“ကိုပီတိ… ဒီအိမ်ခန်းကို လာကြည့်တဲ့လူတွေ အယောက် ၂၀ တောင်မကလောက်ဘူး… ပွဲစားက လူတွေအများကြီးကိုချိန်းထားပြီးပြတာလေ…”
“အင်း… ပွဲစားတွေက အိမ်ကို လေလံတင်သလို ဈေးကိုတောင်းမှာ… ပိုပေးနိုင်တဲ့လူကို ငှားတာပဲ… ပြီးတော့ ပွဲစားက လာကြည့်မယ်ဆို အိမ်လခ နှစ်လစာယူလာခဲ့ ကြိုက်ရင် တခါတည်း စာချုပ်ချုပ်လို့ရအောင်လို့ တဲ့”
“ဟုတ်တယ်… ကျွန်တော့်ကိုလည်း ပွဲစားတွေက အဲလိုပဲပြောတယ်…”
အိမ်ကိုတက်ဖို့ ဓာတ်လှေကားကြည့်တော့ မရှိဘူး။ အိမ်က ငါးထပ်မှာ ဓာတ်လှေကားမရှိ။ ငါးထပ်အထိတက်လည်းပြီးရော ဟောဟဲဆိုက်နေပါပြီ။
အိမ်ထဲလည်း ၀င်ကြည့်တော့ ဘာကြောင့် ဈေးတော်နေလည်းဆိုတာ သိရပါပြီ။ အိမ်က တော်တော်လေး ညစ်ထေးစုတ်ပြတ်နေပြီး ဘယ်လိုမှ နေချင်စရာမကောင်း။ JTC အိမ်တွေ စုတ်တယ်ဆိုတာ တော်တော်လေးကိုကောင်းပါသေးတယ်။
“သားလတ်ရေ… ငါကတော့ ဘာမှတောင်မမေးချင်တော့ဘူး… အိမ်က စိတ်ပျက်စရာကြီးနော်…”
“ဟုတ်ပါ့.. စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲ… ဒီလိုအိမ်ကို တက္ကစီခ အကုန်ခံပြီးလာကြည့်ရတာ မတန်ပါဘူး…”
အိမ်ကို ပြန်အရောက်မှာ ကိုဖြိုးက ပြန်လာသော ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကို လှမ်းမေးသည်။
“သွားကြည့်တာ အိမ်က စုတ်ပြတ်နေတာကို ၁၅၀၀ တဲ့.. ” သားလတ်ကပြန်ဖြေသည်။
“သားလတ်ရေ.. ငါတို့မှာ ပစ္စည်းတွေကလည်း ရှိ… အိမ်ရှင်တွေနဲ့လည်း စကားပြောမပြောချင်တော့ JTC ကိုပြန်ပြီး ကြိုးစားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်…”
“အင်း… လုပ်ကြည့်လေ… ”
“ဒါဆို… အားလုံး JTC website ကို ညမအိပ်ခင်တခါကြည့် မနက် ရုံးမသွားခင် တခါကြည့် ၊ ရုံးရောက်ရင်လည်း တခါကြည့်၊ အိမ်တွေ့တာနဲ့ ချက်ချင်းသွားနိုင်အောင် လစာ ထောက်ခံစာကိုလည်း ထုတ်ထားမယ်နော်… ကျွန်တော်က ဒီအိမ်ကို လက်မှတ်ထိုးထားတော့ နှစ်အိမ်တပြိုင်ထဲ လက်မှတ်ထိုးလို့မရမှာစိုးလို့ သားလတ်နဲ့ ကိုဖြိုးပဲ ပြင်ဆင်ပေးပါ… JTC website ရဲ့ link ကိုသိတယ်… ဟုတ်… ငါပို့ထားဖူးတယ်နော်…”
“ကျွန်တော်က အဆင်သင့်ပဲ….” သားလတ်ကပြန်ဖြေသည်။
“ငါလည်း လိုရမယ်ရ ထောက်ခံစာအတွက် စာစီထားလိုက်မယ်…”
ညမအိပ်ခင်ကတော့ JTC website ကို ကြည့်လိုက်မိသေးသည်။ အိမ်တခန်းမျှမတွေ့။
နောက်နေ့မနက် အိပ်ယာကထတော့ ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ထားပြီး ရုံးကို မသွားခင်အချိန်ကလေးမှာ JTC website ကို ကြည့်မိပါသည်။ အိမ်ခန်းအသစ်တွေတွေ့လို့ ရင်တွေတောင်ခုန်သွားပြီး…
“သားလတ်ရေ… အိမ်ခန်းအသစ်တွေ တွေ့တယ်ကွ…”
သားလတ်ကလည်း အနားကိုလာပြီး ကြည့်သည်။
အိမ်တွေကိုသေချာကြည့်တော့ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်တွေနဲ့ အဝေးကြီးနေရာမှာဖြစ်တော့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ကွန်ပျူတာပိတ် ရုံးကိုထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ညနေ ရုံးကအပြန် အိမ်ကိုရောက်တော့ ကြည့်တော့ JTC website မှာ မနက်ကတွေ့ခဲ့သော အ်ိမ်တွေအားလုံး မရှိတော့ပေ။ အကုန်လုံးငှားလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ကြာသာပတေးနေ့… တရက် တရက်နဲ့ အချိန်တွေကုန် အိမ်ရှာတာလည်း မရသေးတော့ စိတ်တော့ ပူနေမိပြီ။
အိပ်ယာကထမျက်နှာသစ်ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ထားလိုက်ပါသည်။ ပြီးတော့ JTC website ကို ကြည့်မိတော့ အိမ်ခန်း တခန်းမှာမရှိပေ။
ရေချိုး၊ အ၀တ်လဲပြီးတော့ ရုံးကိုသွားဖို့ စက်ပိတ်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှ F5 (browser refresh) ကို နှိပ်လိုက်မိသည်။ ပြီးတော့ အင်မတန်မြန်သောလက်ဖြင့် Windows key ကို နှိပ် u ကို နှစ်ခါ နှိပ်ပြီး စက်ကိုပိတ်လိုက်တော့သည်။
စက်ကပိတ်နေပြီးဆိုတော့မှ JTC website မှာ အိမ်အသစ်တွေကို တွေ့လိုက်မိသည်။
“ဟာ အိမ်ခန်းအသစ်တွေဟ…စက်တောင်ပိတ်လိုက်မိပြီ… ”
ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်မှာ တယောက်မှမရှိတော့၊ ကျွန်တော်က နောက်ကျမှ နိုးတော့ အားလုံး ရုံးကိုထွက်သွားကြပြီ။
စက်ကို အမြန်ပြန်ဖွင့်ကာ ကြည့်လိုက်တော့ ငှားလို့ရတဲ့အိမ်ခန်းက ICA (လ၀က) နားမှာ။ အဲဒီနေရာဆို မဆိုးဘူးပဲ။
ဖုန်းကိုအမြန်ထုတ် သားလတ်ကို အရင်ဆက်လိုက်သည်။
“သားလတ်ရေ… ဘယ်ရောက်နေပြီးလဲ… JTC မှာ အိမ်တွေ့တယ်… ICA နားမှာ နေရာကတော့ကောင်းတယ်…”
“ဟုတ်လား… ကျွန်တော်က ရုံးရောက်တော့မယ်… ကိစ္စမရှိဘူးပြန်လာခဲ့မယ်။ Jurong East မှာ တွေ့မလား… ”
“မဟုတ်ဘူး ငါသွားနှင့်တော့မယ်… JTC ရုံးကိုသာ တိုက်ရိုက်လာတော့… ငါ queue နံပါတ်ယူထားလိုက်မယ်လေ…”
“မင်းဆီမှာ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်တွေပါလား… ”
JTC Summit က ရုံးကိုရောက်တော့ တခြား ဘယ်သူမှမရောက်သေး။ queue နံပါတ်ယူတော့ နံပါတ်တစ်။ ICA နားက အိမ်က အရှေ့ဘက်ဇုံမှာရှိတော့ အရှေ့ဘက်ဇုံကောင်တာမှာ သွားမေးပါသည်။
တိုက်နံပါတ်။ လမ်းနာမည်ကိုပြောပြီးမေးတော့၊ ကောင်တာက ၀န်ထမ်း မလေးမက အချက်အလက်ပါတဲ့ စာရွက်ကိုကြည့်ပြီး ပြန်ဖြေပါတယ်။
“ဒီအိမ်က ငါးထပ်မှာဆိုတော့ ဓာတ်လှေကားရောက်လား…”
“မရောက်ဘူး၊ ဓာတ်လှေကားက ခြောက်ထပ်မှာရပ်တာ… အိမ်က အိမ်အဟောင်းပုံစံ၊ အိမ်သာ ရေချိုးခန်း တခုစီပဲပါတာနော်…”
ထိုအချိန်သားလတ် ရောက်လာသည်။ သားလတ်နဲ့ အိမ်အကြောင်းကို နဲနဲပြောရင်းတိုင်ပင်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဆင်ပြေသည်၊ သားလတ်ကလည်း အဆင်ပြေသည်၊ ကိုဖြိုးကတော့ ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူး။
“သားလတ်ရေ… ငါကိုဖြိုးဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်ဦးမယ်… မင်းကြည့်ပြီး မေးထားလိုက်ဦး…”
ကိုဖြိုးဆီကို ဖုန်းခေါ်နေရင် ရုံးခန်းထဲမှာ ကပ်ထားသော ငှားရန်ရှိအိမ်ခန်းတွေကိုကြည့်မိသည်။ အနောက်ဘက်ဇုံဘက်ကိုကြည့်တော့ လက်ရှိနေတဲ့ အိမ်နားလေးမှာပဲ အိမ်ခန်းတခန်းတွေ့မိလိုက်သည်။ ဆက်နေသော ဖုန်းကို ချက်ချင်း ပိတ်လိုက်ပြီး အနောက်ဘက်ဇုံ ကောင်တာမှာ မေးဖို့ queue နံပါတ်ယူလိုက်တော့သည်။ သားလတ်မေးနေသည့်ကောင်တာကိုသွားပြီး…
“ဟေ့ရောင် သားလတ်… လာ.. အနောက်ဘက်ဇုံကောင်တာကိုသွားမယ်.. အဲဒီမှာ ပိုအဆင်ပြေမယ့် အိမ်ရှိတယ်… လာ… မြန်မြန်….”
သူလည်း ကျွန်တော်ဇွတ်ခေါ်နေတာနဲ့ ကောင်တာက မလေးမ ကို ချက်ချင်းပြောပြီးထွက်လာသည်။
“မင်္ဂလာပါ… ကျွန်တော်တို့ ဒီအိမ်လေးကို စိတ်ဝင်စားလို့ပါ…” ကျွန်တော်က စိတ်လှုပ်ရှားပြီး အမြန်မေးလိုက်မိသည်။
မျက်နှာတင်တင်း ခပ်၀၀ တရုတ်မက ပြန်မေးသည်။
“နံပါတ် ၄မှာ ပြထားတဲ့အိမ်ပါ…”
“မင်းတို့ရဲ့ လစာထောက်ခံတဲ့ စာရွက်၊ အလုပ်လုပ်နေကြောင်း ထောက်ခံစာ၊ ပတ်စ်ပို့၊ အလုပ်သမားကဒ် ဒါမှမဟုတ် IC နဲ့ ဓာတ်ပုံ တွေပါလား”
“ဟင်…ဒီထောက်ခံစာက တလကျော်နေပြီ… ”
“ဟုတ်လား… အဲဒါကို မင်းတို့ရဲ့ စည်းကမ်းချက်ထဲမှာမပါဘူးလေ… ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နေကြောင်းလည်း ထောက်ခံတဲ့စာပါတာပဲ၊ ရသင့်တာပေါ့…”
ပြီးတော့ ကောင်တာက တရုတ်မက ထပ်မေးသည်။
လက်မှတ်ထိုးမယ့် သားလတ်ကို ကြည့်လိုက်တော့…
“ပတ်စ်ပို့စ်တော့မပါဘူးဗျ… IC နဲ့ ဆိုရင်မရဘူးလား… IC မှာ ဓာတ်ပုံပါတာပဲ…”
“မရဘူး… ပတ်စ်ပို့စ် ပါရမယ်လို့ ရေးထားတယ်လေ…”
အင်း… ဒါကတော့ ဟုတ်သည်.. သူ့ဂွင်ထဲရောက်သွားပြီ…
“ကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီး လိုအပ်တာတွေပေးပါ့မယ်…. ဒီအိမ်လေးကို စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးထားတာဖြစ်ဖြစ်၊ ဦးထားတာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့မရဘူးလား။”
“မရဘူး… အဲလိုလုပ်ရင် ကျန်တဲ့လူတွေကို မတရားရာရောက်မှာပေါ့… ဦးရာလူပဲ… မရဘူး…”
“လစာထောက်ခံချက်ကလေ ကျွန်တော့် မန်နေဂျာ ခရီးထွက်နေလို့ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…”
“ကွန်ပျူတာနဲ့ထုတ်တဲ့ လစာစာရွက်ဆိုရင်ရတယ်… ပြီးတော့ ဖက်စ်ပို့လည်း လက်ခံတယ်…”
လို တရုတ်မက ပြန်ဖြေပြီး ကျွန်တော်က အချိန်အကုန်မခံချင်တော့
“လာ…သားလတ်… မင်းရဲ့ ရုံးက သိပ်မဝေးတော့ မြန်မြန်သွား လစာစာရွက် ထုတ်… ငါက အိမ်ပြန်ပြီး ပတ်စ်ပို့ ပြန်ယူပေးမယ်…”
“ဟုတ်… ခက်တာက ကျွန်တော် ရုံးရောက်ပြီး ပြန်ထွက်ရမှာခက်မယ်… တကယ်က ဒီနေ့ မနက် ၁၀နာရီမှာ အစည်းအဝေးရှိတယ်… ကျွန်တော်က chair လုပ်ရမှာ…”
သားလတ်ရဲ့ အခက်အခဲကို နားလည်သည်။ အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ အားလုံးချိန်းပြီးမှဖျက်လို့ရမယ်မထင်။ ကျွန်တော်ကဆက်ပြီး…
“ဒီလိုလုပ်… သွားသာသွားလိုက်.. ပြီးတော့ ပရင်တာထုတ်… ထွက်လာလို့ရင်ရ မရရင် ဖက်စ်ပို့ကြည့်ပါလား... နောက်ပြီး ငါလည်း ငါ့ရုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီး ဖက်စ်ပို့ခိုင်းလိုက်မယ်… မင်းမရလည်း ငါပဲလက်မှတ်ထိုးလိုက်မယ်ကွာ… နော်.. မြန်မြန်သွားလိုက်ရအောင်… ”
ပြောပြောဆိုဆို နှစ်ယောက်သား ရုံးပေါ်က အမြန်ဆင်းက တက္ကစီစီးကာ သားလတ်က သူ့ရုံးကိုသွား၊ ကျွန်တော်က အိမ်ကိုပြန်ပြေးပါသည်။
လမ်းမှာ ကိုဖြိုးကို ဖုန်းဆက်ကြည့်သည်။ သူက ရုံးမှာရောက်နေပြီးဆိုတော့ တခုခုများလုပ်လို့ ရလိုရညားပေါ့။ ကိုဖြိုးက ဖုန်းမကိုင်ပေ…. ခက်ပြီ… အိမ်လေးကို သူများမဦးပါစေနဲ့။
အိမ်ရဲ့ ဈေးနှုန်း၊ အနေအထား၊ နေရာလေးက ကျွန်တော်တို့အတွက် တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေတော့ ဒီအိမ်လေးကိုရလိုက်ရင် အနည်းဆုံး နှစ်နှစ်လောက်တော့ အိမ်အတွက်စိတ်အေးရမယ်။ ဒီအိမ်လေးကို ရမှာဖြစ်မယ်… မဟုတ်ရင် အိမ်အတွက် ရတက်မအေးဖြစ်နေရဦးမယ်။
တက္ကစီပေါ်ကဆင်းတော့ အိမ်ပေါ်ကို အမြန်ပြေးတက်… ပတ်စ်ပို့စ် တွေကိုရှာ… ရှိသမျှ စာအုပ်အကုန်ယူ၊ ပြီးတော့ ရုံးကို ဖုန်းဆက် ဖက်စ်ပို့ပေးဖို့ ရှင်းပြ အကူအညီတောင်းလိုက်သည်။
အိမ်ကနေထွက် တက္ကစီအမြန်ငှားပြီး JTC ရုံးကိုပြန်လာသည်။ လမ်းမှာ သားလတ်ကိုဆက်တော့ ပရင်တာထုတ်ပြီး ရုံးကပြန်ထွက်လာတော့မယ်လို့ လှမ်းပြောပါသည်။ အင်း… အကုန်လုံးတော့ အဆင်ပြေပြီ၊ အိမ်ခန်းလေးကို သူများတွေမဦးပါစေနဲ့။
အင်း.. ကိုယ်လိုချင်တော့ သူများတွေမယူဖြစ်အောင် ဆုတောင်ရမည်ပေပေါ့။
JTC ရုံးကိုရောက်တော့ လူတွေတောင်တော်တော်ရောက်နေပြီ။ Queue နံပါတ်ကိုယူတော့ ၈ ဖြစ်နေပြီ။ ကြည့်လိုက်တော့ အနောက်ဘက်ဇုံ ကောင်တာမှာ နှစ်ယောက်ရှိတတဲ့ JTC ၀န်ထမ်း နှစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက် စလုံးမအားပေ။ ရှိတဲ့အိမ်က လေးအိမ်ထဲ၊ လူက ခုနှစ်ယောက် (မနက်က ကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တော့ နံပါတ် ၁ ကို တွက်စရာမလိုပေ)။ လွယ်ပါ့မလား။ လိုချင်တဲ့အိမ်ခန်းရှိတဲ့နေရာက တော်တော်လေး လူကြိုက်များတဲ့နေရာ။
နဲနဲကြာတော့ ကောင်တာကတယောက်ထွက်လာပြီး ခုနကသူ ငှားလိုက်တဲ့အိမ်ကို ကြော်ငြာဘုတ်မှာ လာဖျက်သွားပါတယ်။ သူဖျက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ထကြည့်လိုက်မိသည်။ ဟူး…တော်သေးတယ်…. လိုချင်တဲ့ အိမ်ခန်းမဟုတ်ပေ။
ရှေ့က အိန္ဒိယနွယ်ဖွားနှစ်ယောက် ဘိုလိုပြောနေသံကို ခိုးပြီးနားထာင်ကြည့်မိသည်။ ကြားရတာ သတင်းကောင်းလေးပဲ… သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ အိမ်ကိုယူမည်မဟုတ်ပေ။
ဒါဆိုရင် Queue နံပါတ်ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်သည်။ ခုန ကောင်တာကလူက နံပါတ်နှစ် ဖြစ်မယ်၊ ကောင်တာမှာရှိနေတဲ့ နောက်တယောက်က သုံး ဖြစ်မယ်။ ရှေ့မှာ ရှိတဲ့ နှစ်ယောက်က ကိုယ်လိုချင်တဲ့အိမ်ကို မယူဘူး။ သူတို့ကို လေး နဲ့ ငါး ထားလိုက်။ ဘေးမှာရှိတဲ့တစ်ယောက်က ခြောက် ဖြစ်မယ်။ တယောက်ပျောက်နေသည် နံပါတ် ခုနှစ်။ အပေါ့အပါးများသွားနေလားမသိ။
ကောင်တာမှာ ရှိ နေတဲ့တယောက် နဲ့ ဘေးကတယောက် မယူဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်အတွက် အဲဒီအိမ်လေးက အခွင့်အလမ်းရှိသေးသည်။
ခက်တာက ရှိတာက အိမ်ခန်း လေး ခန်း။ တခန်းက ငှားပြီး။ ကျန်တာ သုံးခန်း နဲ့ လူက ငါးယောက်။ ကိုယ်ကနောက်ဆုံးမှာရှိနေတာ…. ဟူး……..
ကောင်တာမှာရှိနေတဲ့တယောက်ထပြီးပြန်သွားပြီ… ဘယ်အိမ်များ ယူသွားပါလိမ့်… စောင့်ကြည့်နေမိသည်။ ဘယ်သူမှ သွားပြီး ကြော်ငြာဘုတ်ကိုသွားပြီးမဖျက်ဘူး။
Queue နံပါတ် လေး နဲ့ ငါး ကို ခေါ်လိုက်သည်။ ရှေ့က အိန္ဒိယနွယ်ဖွား နှစ်ယောက်ထသွားသည်။ ကိုယ်မှန်းသလို နံပါတ်တွေက မှန်သည်။ သူတို့ကတော့ ကိစ္စမရှိဘူး။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အိမ်ကိုယူမယ့်လူတွေမဟုတ်ဘူး။
ဘေးကတယောက် နဲ့ ပျောက်နေတဲ့တယောက်ပဲကျန်တော့တာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ တော်တော်လေးကြာတော့ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား တယောက်က ပြီးသွားသည်။ ကောင်တာက တရုတ်မထပြီး ကြော်ငြာဘုတ်ကိုသွား ငှားမည့် အိမ်စာရင်း ဖျက်လိုက်ပြန်သည်။ သိနေပေမယ့် စိတ်မချသေး သွားကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ်ငှားချင်တဲ့အိမ်မဟုတ်။ တော်ပါသေးတယ်။
ပြီးတော့ Queue နံပါတ် ခြောက် ကို ခေါ်လိုက်သည်။ ဘေးကလူ ထိုင်နေရာက ထပြီး ကောင်တာကိုသွားသည်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ သားလတ်ရောက်လာပါသည်။ လက်ထဲမှာလည်း စာရွက်တွေနဲ့။
“ပြေတယ်… မန်နေဂျာကို ငါ အိမ်ကိစ္စလုပ်စရာရှိတယ်.. မလုပ်လို့ မဖြစ်လို့ သူ့ကိုပဲ အစည်းအဝေးတက်ဖို့ အကူအညီတောင်းလိုက်တယ်… တော်သေးတယ်.. အဆင်ပြေတယ်…”
“အိမ်က ဘယ်လိုလည်း… ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား…”
“အေး ရှိသေးတယ်…အခု ကောင်တာမှာရှိနေတဲ့တယောက် နဲ့ ပျောက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုပဲ စိတ်ပူတာ.. ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ အဲဒီအိမ်ကို မယူဘူး… သေချာတယ်…”
အဲဒီအချိန်မှာ ကောင်တာမှာရှိတဲ့ နောက် အိန္ဒိယနွယ်ဖွား တယောက်ကပြီးသွားပြန်ပါသည်။ ကောင်တာက တရုတ်မ ထပြီး ဖျက်လိုက်ပြန်ပါသည်။ ဒီတခါတော့ သားလတ်က သွားကြည့်ပါသည်။ ပြီးတော့ ၀မ်းသားအားရပြန်လာပြီး… “ကိုပီတိ.. ကျန်သေးတယ် ကျန်သေးတယ်… ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ တခန်းပဲကျန်တော့တာ… ”
သားလတ်က စိတ်ထားပြည့်ဝစွာ ဆုတောင်းလိုက်ပါသည်။
“ကောင်တာမှာမေးနေ လူကြီး အိမ်ငှားတာမဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်း စာရွက်စာတမ်း မပြည့်စုံပါစေနဲ့…”
“ဟားဟား …. မင်းကလည်းလုပ်ပြီ…”
သားလတ်ကိုသာအဲလိုပြောပေမယ့် ကျွန်တော်လည်း အဲလိုပဲ စိတ်ထဲမှာ ဆုတောင်းနေမိပါသည်။
ကောင်တာကနေ နံပါတ် ခုနှစ်ကို ခေါ်ပါသည်။ တယောက်မှပေါ်မလာ… နောက်တခါခေါ်ပြီး စောင့်နေသေးသည်… တယောက်မှ ထွက်မလာတော့ နံပါတ်ရှစ်ကိုခေါ်တော့ သားလတ် နဲ့ ကျွန်တော် အပြေးအလွှား ကောင်တာဆီကိုသွားသည်။
ကောင်တာမှာ မနက်ကတွေတဲ့ တရုတ်မ၀၀က ရှေ့တယောက်မေးတာကို ဖြေပေးနေတော့ မအားပေ။ နောက် ၀န်ထမ်း တယောက်ကတော့ မလေးမငယ်ငယ်လေးတယောက်၊ သဘောကောင်းပုံရပါသည်။
“ခဏလေးနော်… အဲဒီအိမ်ငှားလို့ရသေးလား ကြည့်လိုက်ဦးမယ်…”
“ဟုတ်…” ဆိုပြီး ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ ခုန်ရင် စောင့်နေမိပါသည်။
မလေးမငယ်ငယ်က ဘေးက တရုတ်မ၀၀ကိုလှမ်းမေးလိုက်သည်၊
“နံပါတ်လေး အိမ်က ငှားပြီးပြီလား…”
တရုတ်မကလည်း စာရွက်ကိုကြည့် ကြည့်ပြီး
အဲလိုပြောလိုက်တော့ … သားလတ်နဲ့ ကျွန်တော်ကြည့်ပြီး ပြုံးလိုက်မိပါသည်။ လိုချင်အိမ်လေးကိုတော့ ငှားလို့ရပြီပေါ့။
လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေပြ၊ ဖောင်ဖြည့်ပြီးတော့ အိမ်သော့ယူရမယ်နေ့ကိုပါ ချိန်းလိုက်ပါသည်။
စာချုပ်က နှစ်နှစ်စာချုပ်ဖြစ်တော့ အနည်းဆုံး နှစ်နှစ်လောက်တော့ အိမ်ရှာရမယ့် ဒုက္ခသက်သာသွားပါသည်။
ညနေဖက်မှာတော့ ငှားထားတဲ့ အိမ်ခန်းလေးဖက် လမ်းလျှောက်ရင်သွားကြည့်တာ ထင်တာထက် သန့်တော့ ပိုပြီးပျော်ရွှင်သွားပါသည်။
အသစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အိမ်နားမှာ အင်မတန်ခင်တဲ့ အမတယောက်နေပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကံကောင်းပြီ၊ အားရက်မှာ ထမင်းစားဖို့အိမ်တအိမ် နီးနီးနားနားရှိတယ်ပေါ့။ ဖိတ်ကျွေးတာ တခါမှမစားလိုက်ရပေမယ့် ခေါ်ခိုင်းတာတော့ ခံလိုက်ရပါတယ်။
တကယ်ကံကောင်းတာကတော့ မကြာမှီမှာပဲ အဲဒီအမက အိမ်ပြောင်းသွားတော့တယ်။ :P
Posted by P.Ti at Thursday, August 07, 2008 10 comments
အပြင်ထွက်ရင်း လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကင်မရာတလုံးနဲ့ လက်ဆော့ထားတာလေးတွေကို တင်ပြီးတော့ ဆားထပ်ချက်လိုက်ပါတယ်။
Posted by P.Ti at Tuesday, August 05, 20084comments
Posted by P.Ti at Sunday, August 03, 20083comments